Ii-smartphones ezinokusongelwa ziya kwehla kwixabiso ngo-2021 | I-Androidsis
Amaxabiso okusonga ii-smartphones aya kuwa ngo-2021
Iifowuni ezimbini zokuqala zokusonga ezivenkileni ziya kuthengisa ezivenkileni Kwiiveki ezizayo. Kwimeko ye-Huawei Mate X, kulindeleke ukuba izakuba kwinyanga yeSilimela. Ngelixa ngoMeyi I-Samsung Galaxy Fold iya kuqala ukwaziswa kwintengiso. Ezi ziimodeli zokuqala ezimbini zohlobo lwazo kwintengiso kwi-Android.
Nangona kulo nyaka uphela kunokubakho iifowuni ezininzi kolu luhlu. Kuba zikhona iimveliso ezahlukeneyo kwi-Android Oko baphuhlisa ii-smartphones zabo ezisongelayo. Ke sinokulindela iindaba malunga noku kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ngelixa ixabiso isengumcimbi onzima.
Ukusukela oko ii-smartphones zokuqala ezimbini ezisongekileyo eziza kuthi ga ezivenkileni azibizi ixabiso eliphantsi. Iifowuni ezimbini zokuqala ezifikelela ezivenkileni ziya kwenza njalo ngamaxabiso ngaphezulu kwe-2.000 euro. Ke banabaphulaphuli abanqunyelwe. Iindleko eziphezulu zemveliso kunye nezinto ezintsha zinoxanduva. Nangona kulindeleke ukuba ngokuhamba kwexesha amaxabiso azakwehla.
Ke ngoko, iimveliso ezininzi ziyathanda imbeko o Alcatel kwangoko linda kude kube ngu-2020 ukuze i-smartphone yayo yokuqala isongelwe. Isizathu kukuba iindleko ziya kuncipha ngokuhamba kwexesha. Ke ngoko, ngekhe babe namaxabiso aphezulu njengeMate X okanye iGolden Fold. Nangona iHuawei ngokwayo ifuna ukuthoba amaxabiso okusonga ii-smartphones.
Uhlobo lwesiTshayina uqobo lwalo kutsha nje luthi bafuna ukumilisela ukusonga ii-smartphones ngaphantsi kwe-1.000 euro. Ngokuqinisekileyo yinjongo yebhongo, ukuba sijonga ixabiso abalibambayo ngoku. Kodwa yinto enokuphunyezwa. Nangona kungayi kubakho de kube ngu-2021 xa siza kubona ukwehla Amaxabiso okwenyani kweli candelo lentengiso. Kulo nyaka besinokuba nazo iifowuni zokuqala ngexabiso elingaphantsi kwe-1.500 yeedola. Oko kukuthi, malunga ne-1.300 euro yokutshintsha. Ngaphandle kokungathandabuzeki, ibonisa utshintsho olubalulekileyo, ukusuka kumaxabiso malunga ne-2.000 euro namhlanje.
Olu ke luqikelelo olwenziwe yi-CEO ye-BOE. Kulabo abangaziyo ukuba yintoni, i-BOE yinkampani yesikrini ejongene nayo yenza iphaneli esinayo ngoku kwi-Huawei Mate X. Ke banamava okwenza ezi zinyosi zobusi zisongwayo. Kodwa okona kubaluleke ngakumbi, bayazi ukuba kubiza malini ukuvelisa olu hlobo lwepaneli. Ke ngoko, ukuba ucinga ukuba kwiminyaka embalwa ixabiso lizakuhla, yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Nangona okwangoku baqikelelwa ukuba i-CEO yenkampani yenziwe.
Kuyenzeka ukuba uHuawei abe Okokuqala ukumilisela ukusonga i-smartphone engaphantsi kwe-1.500 euro. Ngelixa iimveliso ezinje ngeAlcatel ezilinde i-2020 sele zithethile ukuba iifowuni zazo ziya kuba zitshiphu. Kodwa ii-specs zayo zinokuthozama. Kodwa kuya kuba ngumdla ukubona indaleko eyakwenzeka kule meko, kuba amaxabiso kufuneka ehle kweli candelo. Ngokukodwa ukuba ufuna ukuyigcina njengenokhetho olufanelekileyo.
Ke ngoko, siya kujonga kwindalo yokusonga ii-smartphones kwi-Android. Isamsung kunye neHuawei kubheja enkulu Kweli candelo, ukusukela banelungelo elilodwa lomenzi wechiza Kwaye baziwa ngokusebenza kwiimodeli ezintsha. Kwakhona, asinakho ulibale ezinye iimveliso ezinje ngeXiaomi ukuba ifowuni yabo yokuqala yokusonga phantse ilungile. Ke kulo nyaka wonke sinokuba sele sinazo izinto ezinqabileyo kweli candelo. Ukongeza kwiimpawu eziza kusungula iifowuni ngo-2020, inani elikhulayo.
Ucinga ntoni ngamaxabiso ee-smartphones ezisongelayo ngoku? Kuya kufuneka ndibone zeziphi iintengiso abanazo Kwimarike iGolden Fold kunye neHuawei Mate X ekufikeni. Nangona, yonke into ibonisa ukuba iiyunithi ezikhoyo ziya kuncitshiswa, ukuvavanya ukwamkelwa okukhoyo kwintengiso ngokubhekisele kwezi modeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Amaxabiso okusonga ii-smartphones aya kuwa ngo-2021
Olu luvo lusibonisa ukuba ifowuni yokusonga yakwa-Motorola iya kuba njani
Kufuneka wenze ntoni xa uMncedisi kaGoogle engaphenduli kwi-Android